Ngwa Arduino na mbadamba iji bido n'ụwa a | Akụrụngwa n'efu
Ibido na Arduino: kedu bọọdụ na ngwa nwere ike ịmasị ịmalite
Na HWLibre enwere ọtụtụ ọrụ emere site na otu nhọrọ Arduino dị iche iche dị na ahịa nke anyị kwuru maka ya. Eziokwu bu na ohere di otutu di otutu ma, dika o na-eme, onye obula nwere ihe di iche iche di iche iche ma obu ihe kariri ndi ozo ka ha mejuputa oru maka njirimara ya.
N'ihi nke a taa, anyị chọrọ ịkwụsị obere oge, kama ịga n'ihu na-ekwu maka ọrụ dị iche iche, were obere ikuku wee zute iji kpaa maka isiokwu dị mfe ma na n'ezie, mgbe anyị bidoro n'ụwa a, ọ gaara enyere anyị aka ọ dị mma ebe na-amalite, ihe ga-abara ndị niile na-amalite ụwa a ọchị ọchị na nke egwuregwu.
Ọ bụrụ na ị ruru ebe a, n'ezie ị ga-enwe oke ịnụ ọkụ n'obi maka ihe ọ bụla inwe ụfọdụ ihe ọmụma nwere ike ịnye ga-enye gị ohere, dịka ọmụmaatụ, iji mepụta ígwè ọrụ gị, rụọ ọrụ dị iche iche kwa ụbọchị nke ị na-arụ n'ụlọ gị ... na ihe niile nke a bụ ekele maka iji ihe ngwaike ngwanrọ anaghị akwụ ụgwọ. Anyi ka anyi bido?
1 E nwere ụdị Arduino dị iche iche, kedụ nke m ga-ahọrọ?
1.1 Ogwe osisi Arduino
1.2 Arduino mbadamba kwekọrọ
2 Ndị na-atụ maka ngwa ngwa Starter
E nwere ụdị Arduino dị iche iche, kedụ nke m ga-ahọrọ?
Ozugbo ị matachara ihe ị chọrọ ime, ikekwe ihe mbụ ị ga-eme bụ ikpebi ụlọ ọrụ Arduino ị ga-ahọrọ. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, eziokwu bụ na mkpebi a ga-abụ ihe ndabere nke nsonaazụ ikpeazụ ị nwetara kemgbe ya ije nwere ike amachi gị echiche nnọọ a bit na n'elu ihe niile ngwọta ị pụrụ ịmụta ime ka oru ngo a udi.
Isi okwu dị oke mkpa abụghị naanị nha na akụkụ ahụ ị nwere ike ijikọ na ya, mana bọọdụ n'onwe ya ebe ọ bụ na anyị enweghị ike ịbelata onwe anyị inweta Arduino dị ka ndị a, m na-ekwu maka ndị ọrụ gọọmentị, kamakwa ndị ọrụ gọọmentị ndị a (E nwere ọtụtụ nhazi) anyị ga-etinye ihe niile ihe mbadamba ndị ahụ kwekọrịtara na-enye anyị, ihe na-agbasawanye nhọrọ anyị ebe ọ bụ na, ọ bụrụ na mbụ Anyị chọrọ otu nha anya na njikọta otu ụdị, ikekwe ndị ọrụ gọọmentị anaghị enye ya mana dakọtara.
Ogwe osisi Arduino
Arduino, kemgbe ọtụtụ afọ (ọ dịla n'ahịa kemgbe 2006) esila na a na-enye ya n'otu usoro iji dịrị dị taa na ụdị 12 dị iche iche nke, mgbe oge ruru, anyị nwere ike itinye ndị kwụsịrị. N'oge a, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta bọọdụ nke kachasị dabara maka mkpa gị, enwere ike ịnwere ike ịnweta otu mgbakwunye, ndọtị, na ngwa iwu ndị Arduino na-ere site na weebụsaịtị ya ma ọ bụ site na nke ọ bụla n'ime ndị na-ekesa ya.
N'oge a, dịka ị nwere ike ịhụ na foto gara aga, n'ụzọ bụ isi ọdịiche dị n'etiti nhọrọ Arduino nyere anyị dabere na size, Njikọta na ukwu nke ma analọg na dijitalụ ntinye ma ndapụta nke efere etinyere nwere. Isi okwu nke anyị ga-eburu n'uche bụ ebe nchekwa dị n'ime nke aka ahụ n'onwe ya, nke mere na ihe mgbagwoju anya (na ọkwa koodu) oru ngo nke anyị ga-arịgo, ọ ga-achọ ebe nchekwa ka ukwuu.
N'etiti ndị dị iche iche nhọrọ na anyị nwere, anyị na-ahụ onwe anyị na nzọụkwụ mbụ na Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla., na-enweghị mgbagha kachasị ihe nlere dị iche iche yana n'aka nke nwere ọnụ ọgụgụ na ntinye dị ukwuu. N'uche m, ọ bụ ezigbo mma ma ọ bụrụ na ịmalite.
Otu nzọụkwụ dị elu anyị na-ahụ Arduino efu, Ezigbo ma ọ bụrụ na ịchọrọ ike karịa ebe ọ bụ na ha nwere CPU dị ike karị na ebe nchekwa dị ukwuu ma RAM na ROM. Ọ bụrụ na ịchọrọ ntinye ntinye dijitalụ nke iji jikọta modulu dị iche iche, nhọrọ kachasị mma ga-abụ ịnweta otu Arduino Mega.
N'oge a, a ghaghị ịkọwa ihe nkọwa, n'otu aka ahụ, eziokwu ahụ na ọ dị mwute enwere ọtụtụ bọọdụ Arduino adịgboroja na ahịa, nke nwere ike isi ike mgbe ụfọdụ ịchọpụta ma ọ bụrụ na ha bụ eziokwu ma ọ bụ ụgha, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị na-achọ a Arduino Uno. Nke abuo, gwa gi na efere ahu Ezubere Arduino maka ahịa United States naanị, ebe na-abụghị nke a, a na-ere ụdị ahụ dị ka Ezigbo naanị ọdịiche dị n'etiti ụdị abụọ ahụ bụ nsogbu gbasara iwu na azụmaahịa.
Arduino mbadamba kwekọrọ
N'oge ahụ, ọkachasị mgbe ị nwere ihe ọmụma zuru oke gbasara ngwa elektrọnik, ịnwere ike ịtụle echiche nke iwulite bọọdụ nke gị na ngwa na ngwa Arduino niile. Nke a bụ echiche ziri ezi na ọtụtụ ndị nrụpụta esorola bụ ndị jirila ụzọ dị mma nke ịdọrọ na ama ama nke ikpo okwu a iji nye ihe ngwọta, ụfọdụ na-atọ ụtọ, n'ụzọ zuru ezu dakọtara na a obere ọnụahịa.
N'etiti efere kwekọrọ na anyị nwere ike ịchọta, ọ dị mkpa ịiche ọdịiche dị na nke m, n'echiche m, nke kachasị mma bụ ndị na-enye gị ohere jiri gburugburu ebe obibi IDE Arduino Mgbe, na ngwaike ngwaike, ha na-enye gị ohere iji otu ngwaike ahụ, ọkachasị n'ihe gbasara akụrụngwa, ebe ọ bụ na, na akụrụngwa, ị ga-ahụkwa ọtụtụ ndị nrụpụta dị iche iche na atụmatụ dị iche iche. N'etiti ihe atụ dị iche iche anyị nwere ike ịchọta nke kachasị mara amara, ọkachasị site na obodo dị adị na na, mgbe oge ruru, nwere ike ịba uru dị ukwuu n'ajụjụ metụtara nkwado teknụzụ:
Onwere: Ikekwe onye kacha mara amara, ezinụlọ a na Arduino dakọtara nwere ọtụtụ ụdị mbadamba nke yiri nke mbụ ahụ. Modeldị kachasị atụ aro bụ Epic, nke kwekọrọ na Arduino Mega ma na-efu $ 44.
Zigduino: Otu n'ime ụdị dakọtara nke na-agbakwunye ọrụ mgbakwunye maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnụahịa dị na mbụ. N'okwu a, enwere njikọ njikọ Zigbee maka $ 70.
Funduino: Otu n'ime ụdị dakọtara na Arduino Uno kasị oké ọnụ ị pụrụ inweta. Ọ na-efu ihe na-erughị euro 7 ma enwere ụdị dabara na nsụgharị ndị ọzọ.
Mgbasa ozi: Dị ka ị pụrụ ịhụ, akụkụ nke aghụghọ nke bọọdụ dakọtara bụ ime ka aha ahụ dị mgbagwoju anya ma eleghị anya iji rite uru nke mgbagwoju anya ahụ. Ihe nlere a bu nke ulo Uno ma o na efu 18 euro.
SaintSmart: Dakọtara na Arduino Mega 2560, ọ na-efu ihe na-erughị euro 20.
XcSource: Otu n'ime ụdị ya kachasị atọ ụtọ bụ nke dakọtara na Arduino Uno, ọ na-apụkwa maka euro 12.
BQ Zum isi: Ọ bụ ezie na bọọdụ a na-adọrọ mmasị, eziokwu bụ na ị ga-akpachara anya na ya na Arduino adabaghị kpamkpam. Echiche bụ na mgbe emechara nhọrọ a, e mepụtara otu obodo ebe ị nwere ike ịchọta modulu, nkuzi, nkwado na ọbụlagodi mmemme mmemme dabara na mbadamba Arduino.
Ndị na-atụ maka ngwa ngwa Starter
Ozugbo anyị kpebiri ụdị bọọdụ kachasị amasị anyị, ma ọ bụ nke gọọmentị ma ọ bụ dakọtara, ọ bụ oge ịzụta kit. Ihu ọma mgbe ị na-ahọrọ bọọdụ ihe anyị nwere bụ nke a, bọọdụ, mana anyị chọrọ ihe ndị ọzọ dị ka eriri USB nke anyị ga-esi tinye sọftụwia anyị na ebe nchekwa ya ma ọ bụ nye ike ya na modulu dị mgbagwoju anya nke na-enyekwu nkọwa dum oru ngo.
Ka anyị wee ghara imebi onwe anyị oke, ebe ihe oru a chọrọ ga-eme ka anyị mata nke ọma ihe anyị nwere ike ma ọ bụ na ọ gaghị adị anyị mkpa, aga m aga n'ihu ịza ajụjụ banyere ụfọdụ ngwa mbido ị nwere ike ịchọta n'ụlọ ahịa ọ bụla ma ọ bụ onye na-ekesa nke ika, ma site na Arduino n'onwe ya, yana nke ọ bụla n'ime bọọdụ dakọtara. N'echiche a, dabere na ngwongwo ndị etinyere na kit ahụ, ọ ga-adị ọnụ ma ọ bụ karịa, nhọrọ dị ọtụtụ ma dịgasị iche:
Arduino Official Kit: Ngwa mmalite, na Spanish na yana akwụkwọ ntuziaka na ọrụ dị iche iche dị njikere ịgbakọta.
Kit Arduino Ntughari Sparkfun 3.2: Ndị ọrụ gọọmentị maka ndị mbido na ọkwa etiti na ihe niile ịchọrọ maka ọrụ izizi nke mmemme na mmekọrịta na ngwaike. Ọ gụnyere akwụkwọ ntuziaka zuru oke na Bekee mana enwere ike ibudata nsụgharị Spanish na ntanetị.
Ngwa Arduino Starter Kit: Ngwunye Starter zuru oke na nkwa dị mma. Ọ bụ kit ahụ na-ere www.arduino.org (ụlọ ọrụ na-achịkwa akara Arduino na mpụga United States). Ngwa a gụnyere akwụkwọ ntuziaka na Spanish, efere ahụ Arduino UNO na n'ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ Spanish a na-ere ya dị ka nke mbụ.
Kit dakọtara na Arduino Uno R3: nwere ihe 40 dị na ya. Ọ bụ otu n'ime nhọrọ dị ọnụ ala.
Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.: Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga maka bọọdụ dakọtara na Funduino, ngwa a bụ nhọrọ ka mma karịa bọọdụ dị iche.
Kuman Super Starter Kit: Ezigbo maka ndị mbido. Otu n'ime akụrụngwa Arduino kacha dakọtara nke ọma na-akwadoghị. Ọ gụnyere ihe 44, nkuzi na koodu iyi maka ọrụ ndị ahụ.
Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.: A gbanwere ngwa ngwa na 2016 yana akụrụngwa karịa nke gara aga (ihe 49). Gụnyere ihe karịrị ọrụ iri abụọ na nke a zuru oke yana ihe niile ịchọrọ iji sonye na Arduino.
Kit SainSmart Basic Starter Kit: A kit Arduino UNO na ọnụego akwụgoro yana ihe niile ịchọrọ ịmalite ịnwale ma mepụta ọrụ 17 site na isoro nkuzi gị. Ọ naghị etinye akwụkwọ ntuziaka na nkuzi nkuzi ọ bụla mana ọ dị maka nbudata yana ha nwekwara ọwa na YouTube.
Ngwa Zum: Jiri nlezianya gosipụta na ụdị dị iche iche na nke dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Ibido na Arduino: kedu bọọdụ na ngwa nwere ike ịmasị ịmalite
Ọdịiche mbụ efere na akwụkwọ, mgbe anyị na-ekwu banyere efere na oghe isi software ọ squeaks a bit…. tumadi mgbe otutu ndi otu mbu mepụtara arduino n’ihu ọha gara na patent office ka ha deba aha ahia arduino.
Ngwakọ dị n'etiti Arduino nke ndị a na ọdụm 2 rụrụ ọrụ nke ọma maka m. Mbipụta 3D dị ebube na akụrụngwa a wee mezie Arduino ọtụtụ ihe nwere ike ịme.
Kedu asụsụ mmemme m ji akụziri ụmụ m
Ndị a bụ akụkọ niile Rasberi Pi 3 Model B + na-enye